Umvelisi weZixhobo zamazinyo, Isandla sesandla samazinyo | YAYIDA
I-YAYIDA Dental Medical Company ekhethekileyo kwisantya esiphezulu kunye nesantya esisezantsi sesandla samazinyo kunye nemveliso yezahlulo.
Isandla sesandla esisezantsi samazinyo
Izahlulo zesandla samazinyo eziSpare
Izinyo Led Light
ICandelo leX-reyi yamazinyo
Yamazinyo Ultrasonic Scaler
Umenzi weZixhobo zamazinyo
I-YAYIDA-Umenzi wezixhobo zamazinyo zobuchwephesha kwizandla zamazinyo, isitulo samazinyo kunye nokukhanya kwe-LED yamazinyo ukusukela ngo-2006.
Ikhethekileyo kwisantya esiphezulu samazinyo kunye nesantya esisezantsi sesandla.
YAYIDA Dental Portable 1:1 16:1 1:5 contra engile isantya esicothayo iqhekeza lesandla soMbane Motor LED Brushless yombane micro mo
1. IMoto yoMbane Uluhlu olubanzi lwemisebenzi yohlengahlengiso lwesantya.Ngokuxhomekeke kwisicelo, isantya sinokuhlengahlengiswa ukusuka kwi-100 ukuya kwi-200,000 rpm kunye nezandla ezahlukeneyo zamazinyo!2. I-Motor Motor Lightweight kunye ne-compact kunye ne-torque ephezulu.I-ergonomically yenzelwe ubude kunye nobunzima ukunciphisa ukudinwa ngexesha leeyure ezinde zokusebenza. I-motor inokuthi ifakwe inzala ngokufaka i-autoclaving!
Iingcebiso zeYAYIDA zamazinyo ze-Ultrasonic Scaler zokuKhalisa iPeriodontics Endodontics ye-Woodpecker Ems Satelec DTE
1. Yenziwe kwi-High-Quality Medical Grade Stainless Steel.2. Inqanaba eliphezulu lokuchaneka kunye nokuguquguquka ngelixa uqhuba iNkqubo yeKlinikhi3. IsiGaba esiPhakamileyo soBubuhle kunye noKuchasana nokuMhlwa.
YAYIDA wamazinyo Ukunyanga ukuKhanya kwiFayibha yeFayibha Iingcebiso zeglasi
1. Ngokwezicelo ezahlukeneyo, kunye noyilo olunengqiqo kunye nokuveliswa okuthambileyo, usebenzisa iteknoloji ephezulu, sinokubonelela ngeemveliso ezahlukeneyo zeglasi optical fiber, kunye ne-transmissivity engaphezu kwe-56% ngemitha nganye.2. Yenziwe ngefiber ephezulu ebonakalayo kunye nentsimbi.3. I-Autoclavable yokusetyenziswa ngokuphindaphindiweyo.
1. I-manicure drill ixhotyiswe ngeyunithi yokulawula amandla e-compact kunye nentsimbi kunye nomsebenzi wangaphambili / wokubuyela umva, ukulungelelanisa isantya sokujikeleza, umatshini wokutshintshwa kwezinto ezilula kunye nokukhawuleza, ilungisa ngokuthembekileyo i-cutter kwi-tip, ukuyithintela ekujikeni ngexesha. ukusebenza.2. I-handpiece ye-drill ine-air intake ekhethekileyo yokupholisa i-micromotor, ukuphepha ukushisa kwaye uqiniseke ukuba usebenza ngokuzinzile.3. Uyilo oluncinci umlomo wentsimbi ukuze ubambe ngokugqibeleleyo. I-handpiece ibandakanya iibheringi ezi-4 eziqinisekisa ukungcangcazela kwamahhala kunye nokugxila okugqibeleleyo kokucubungula umphezulu we-nail plate ngokugqibeleleyo.
Inkampani yeYAYIDA ineqela elinye elinomdla wokuthengisa kunye nenkonzo emva kokuthengisa. Kwangaxeshanye, nikezela nge stop enye yokuthenga.
Inkampani igxininisa "Umgangatho kuqala, iNkonzo kuqala". Ukunyanzelisa ukuthengwa kwemathiriyeli ekrwada, izixhobo, izixhobo kunye nemilinganiselo, ukuzama konke okusemandleni ethu ukwenza iimveliso zethu zisondele kwezona mveliso zisemgangathweni ofanayo kwihlabathi.
Inkampani izalisekisa imveliso ye-ISO13485, igxininisa ekuveliseni iimveliso ezininzi zamazwe ngamazwe. Kwaye sibonelela ngenkonzo ye-OEM/ODM.
Ngaphandle kokugqwesa kwethu kwishishini le-ODM.
Sele sithumela amakhulu eemveliso zethu.
Inkqubo yokulawula umgangatho wemveliso ngokungqongqo.
Yonke iprojekthi esisebenza kuyo ijongwa ukuqinisekiswa komgangatho.
Inkampani yamazinyo YAYIDA ekhethekileyo kwisantya esiphezulu kunye nesantya esisezantsi sesandla samazinyo, uphando kunye nophuhliso lwamalungu amatsha amazinyo kunye neemveliso.
Inkampani ye-YAYIDA ineemodeli ezahlukeneyo umatshini weNomuRADS ovela eJapan, unokuhlangabezana neenkonzo zokuchwetheza ezichanekileyo zomthengi.Ukwenzela iimveliso ezikhethekileyo zabathengi, sinyanzelisa ukuba akukho luntu kwaye kungabikho kuthengiswa kwabanye abathengi, ukuba libe lishishini elithembekileyo.
Siyabuthanda ubomi, kwaye siyawuthanda umzi-mveliso wamazinyo. Siyathemba ukuba iimveliso zethu zamazinyo zingenza oogqirha kunye nethemba lezigulane libe yinyani ngokulula----Yenza amazinyo aphile.
Inkampani izalisekisa imveliso ye-ISO13485, igxininisa ekuveliseni iimveliso ezininzi zamazwe ngamazwe.
Isixhobo sesandla se-LED samazinyo esinesantya esiphezulu se-AYD-SLCM4
Abahlobo bethu beza kundwendwela umzi-mveliso wethu, kwaye bafuna ukwenza iodolo yesandla esinesantya esiphezulu kunye nesantya esisezantsi sokuodola. Bayonwabile ngumsebenzi wethu wamazinyo kunye nenkonzo yethu. Siqinisekile ukuba iya kuba corperation ixesha elide. Ukwaneliseka koMthengi kuya kuba yinkuthazo yethu, siya kuhlala siphucula umgangatho kunye nenkonzo.